Lee Automobile သည် တတိယ သုံးလပတ် တွင်ဒေါ်လာ ၃. ၃ သန်း အရှုံးပေါ် ခဲ့ပြီး Lee ကား ၂၅, ၁၁၆ စီး ပို့ဆောင် ခဲ့သည် - Pandaily
Lee Automobile သည် တတိယ သုံးလပတ် တွင်ဒေါ်လာ ၃. ၃ သန်း အရှုံးပေါ် ခဲ့ပြီး Lee ကား ၂၅, ၁၁၆ စီး ပို့ဆောင် ခဲ့သည်
Nov 29, 2021, 20:06ညနေ 2021/11/30 11:57:06 Pandaily
တရုတ် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူLee Automobile သည် တတိယ သုံးလပတ် ဝင် ငွေကို တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာ ခဲ့သည်ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာအရ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္ တတိယ သံုးလ ပတ္တြင္ စုစုေပါင္း ၀င္ေငြ ယြမ္ ၇ ဒသမ ၇၈ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၂၁ ဘီလ်ံ) ရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ တတိယ သံုးလ ပတ္တြင္ ယြမ္ ၂ ဒသမ ၅၁ ဘီလ်ံ ရွိ ခဲ့ရာမွ ၂ ၀၉ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ လာခဲ့သည္။
ကုမ္ပဏီ ၏တတိယ သုံးလပတ် အသားတင် အရှုံး မှာယွမ် ၂၁. ၅ သန်း ဖြစ်ပြီး ၂၀၂၀ တတိယ သုံးလပတ်တွင် ယွမ် ၁၀၆. ၉ သန်း ရှိရာမှ ၇၉. ၉% ကျဆင်းခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် လျှပ်စစ် ကား ထုတ်လုပ်သူ ၏စုစုပေါင်း အမြတ် သည်ယွမ် ၁. ၈၁ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယွမ် ၄ ၉၆. ၈ သန်း ရှိရာမှ ၂ ၆၄. ၈% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၎င်း ၏စုစုပေါင်း အမြတ်အစွန်း သည် ၂၀၂၀ တတိယ သုံးလပတ်တွင် ၁၉. ၈% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၃. ၃% ရှိသည်။
Delivery …လီ သီ၂၅, ၁၁၆ စီး ရှိပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၉၀. ၀% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ယခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Lee Automobile သည် အမြတ် ၇, ၆ ၄၉ စီး ရရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၀၇. ၂% တိုးတက်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ် တတိယ သုံးလပတ်တွင် ကား ရောင်းအား သည်ယွမ် ၇. ၃၉ ဘီလီယံ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၉၉. ၇% တိုးတက်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်အထိ Lee Motors သည် မြို့ ပေါင်း ၈၆ ခုတွင် လက်လီ အရောင်းဆိုင် ၁၆၂ ခု ရှိပြီး ၀ န်ဆောင်မှု စင်တာ ၂ ၂၃ ခုနှင့် မြို့ ပေါင်း ၁၆၅ ခုတွင် လုပ်ကိုင် နေသော တရားဝင် စာရွက် သတ္တု မှုန်ရေမွှား ဆေးသုတ် သည့် ဆိုင် များရှိသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Lee Automobile သည်၎င်း၏ ဆောက်လုပ် ရေးကို တရားဝင် စတင် ခဲ့သည်ပေကျင်း ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း၂၀ ၂၃ ခုနှစ်မှာ စတင် လည်ပတ် ဖို့ စီစဉ် ထားပါတယ်။ ၎င်းသည် Lee Automobile Advanced BEVs အတွက် အရေးပါသော ကုန်ထုတ်လုပ်မှု အခြေစိုက်စခန်း ဖြစ်လာ လိမ့်မည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ပိုမို ကျယ်ပြန့်သော ထုတ်ကုန် များဖြင့် စျေးကွက် ၀ ယ် လို အားကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်သည်။
Little Automobile ၏ဘဏ္ Financial ာရေး အရာရှိ ချုပ် Li Tie က “ငါတို့ နှစ် ဦး စလုံး ကန ဦး စာရင်း မှတစ်ဆင့် ဟောင်ကောင်ဒေါ်လာ ၁၃ ဘီလီယံကျော် အသားတင် အမြတ် ငွေ ရရှိ ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့ ၏အနာဂတ် တိုးတက် မှုအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အရင်းအနှီး အခြေစိုက် စခန်းကို ပိုမိုခိုင်မာ အောင် ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ အလွန် ၀ မ်းသာ ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် မကြာသေးမီက အောင်မြင် မှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ကျွန်ုပ်တို့ ၏စီးပွားရေး ကိုထပ်မံ တိုးချဲ့ ပြီး လျှပ်စစ်ဓာတ် အား၊ စမတ် လေယာဉ်မှူး နှင့် ADAS နည်းပညာ များတွင် တိုးတက် မှုနှင့်အတူ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကိုဆက်လက် အာရုံစိုက် သွားမည်ဖြစ်သည်။ “
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Xiaopeng, Lithium Automobile နှင့် NIO တို့သည် အောက်တိုဘာလတွင် ရောင်းအား ရှိကြောင်း ကြေငြာ ခဲ့သည်-Xiaopeng သည် ထိပ်ဆုံး သို့ရောက် သည်
၂၀၂၁ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ်တွင် ကား အစီးရေ ၃၀၀၀၀ မှ ၃၂၀ ၀၀ ကြားရှိ မည်ဟု ကုမ္ပဏီက ခန့်မှန်း ထားပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ် နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၁၀၇. ၄% မှ ၁၂၁. ၂% အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၈. ၈၂ ဘီလီယံမှ ၉. ၄၁ ဘီလီယံ ကြားရှိ သင့်သည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် စတုတ္ထ သုံးလပတ် ထက် ၁၁၂. ၇% မှ ၁၂၆. ၉% တိုးလာခဲ့သည်။
Tags electric vehicle | financial report | Li Auto | Li One
Lee Automobile ၏ ၂၀၂၁ အသားတင် အရှုံး သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၁၁၁. ၉% တိုးတက်ခဲ့ပြီး CTO ရာထူးမှ နုတ်ထွက် ခဲ့သည်
လီ ကားတရုတ် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ထုတ်လုပ်သူ အသစ်သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်ကုန်ဆုံး သည့် စတုတ္ထ သုံးလပတ် နှင့်တစ် နှစ်လုံး အတွက် စစ်ဆေး ခြင်းမရှိသော ဘဏ္ results ာရေး ရလဒ်များကို သောကြာ နေ့တွင် ကြေငြာခဲ့သည်။
Auto Feb 25 ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 25, 2022
လီကွမ်ယု၏ ဒုတိယသုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအရ အသားတင် အရှုံးပေါ်မှု ၃၄.၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျော့ကျသွားဖွယ်ရှိပြီး တတိယသုံးလပတ်အတွင်း တင်ပို့ရောင်းချမှု NIO ထက် ပိုမိုမည်ဖြစ်
တရုတ်လျှပ်စစ်ကား ထုတ်လုပ်သူ လီကွမ်ယုက တနင်္လာနေ့မှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ဒုတိယသုံးလပတ်အစီရင်ခံစာအရ အသားတင် အရှုံးပေါ်နေတဲ့ ယွမ် ၂၉၅ ဒသမ ၃၆၀ သန်းကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ပထမသုံးလပတ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ၃၄.၆ ရာခိုင်နှုန်းအထိ လျှော့ချပေးခဲ့ပါတယ်။
Auto Aug 31 ဩဂုတ် 31, 2021
Faraday သည် Nasdaq delisting သတိပေးချက် ကိုရ က် ၆၀ အတွင်း လိုက်နာ မှု အစီအစဉ်ကို တင်ပြ ရန်လိုအပ် သည်
Faraday Future (FF) က နို ၀ င်ဘာ ၁၇ ရက်တွင် Nasdaq စတော့အိတ်ချိန်း မှ ဖျက်သိမ်း ရန် သတိပေး စာကို လက်ခံရ ရှိကြောင်း အင်္ဂါနေ့ ကပြောကြားခဲ့သည်။
Auto Nov 26 နိုဝင်ဘာ 29, 2021